Shiinaha Soo Saarayaasha Ilkaha Iibiyaha iyo alaableyda | Noocee
Pops A Ilkaha
Qiimaha Tixraaca FOB (Hel Qiimaha Ugu Dambeeya) 1020-2999 Dajisaa: $ 2.64
> = 3000 nooc: $ 2.60
Waqtiga Hogaaminta Tirada (Dajisaa) 1 - 10020> 10020
Est. Waqtiga (maalmaha) 25 In laga wada hadlo
Isticmaal Qalabka dayactirka ilkaha
Magaca badeecada Pops A Ilkaha
Lambarka Moodalka: CA006
Qalabka ABS caag ah + bir birta ah
Midab madow + caddaan
ODM Soo dhawow
Dhererka (cm): 19.5x18.5x8.5
Miisaanka (g) 365g
Baakadaha alaabta: Midabada SANDUUQ
TyDayaanna ： 60pcs
Miisaanka Guud (kg): 21kg
Miisaanka saafiga ah (kg) ： 20kg
Cabbirka kartoonka (cm): 89x58x40
Fudud & Degdeg-dheg dheg, foorar & ilko ama daal ayaa dhammaaday!
1) Waxaa soosaaray kana faaiideystay khubaro auto-boby ku xeel dheer
2) Naqshadeynta buundada gaarka loo leeyahay ee patent-ka ee loo yaqaan 'elimi-nates' oo ah fursad loogu talagalay waxyeelo dheeri ah. Nidaamyada kale ee aan lahayn naqshadeynta buundada qaansoleyda ah ayaa la ogsoon yahay inay dhab ahaantii ku darto godad baabuur!
3) Naqshadeynta naqshadeynta nidaamka dhejiska ee patent-ka ah ayaa damaanad qaadeysa ka saarida ilkaha iyada oo aan la helin qashin, haraaga dhejiska ah, nidaamyada kale ayaa lagu yaqaan inay ka baxaan.
4) Dayactirka ilkaha kudhowaad meel kasta oo baabuur kasta ah.
5) Si fudud uga qaad dushooda roobdhagaxyaalaha, albaabada gaariga, gawaarida wax lagu gado iyo waxyaabo kale oo badan adigoon waxyeeleynin dusha gaarigaaga
Way fududahay in la isticmaalo, kaliya seddex talaabo oo fudud iyo Pops-A-Dent ayaa ka qaada dusha.
laga bilaabo roobdhagaxyaale, albaabada gaariga, gaadhiga wax lagu iibiyo iyo waxyaabo kale, adigoon waxyeello u geysan gaarigaaga dushiisa.
Pops-A-Dent wuxuu kuu badbaadinayaa waqti iyo lacag waana beddelka dhaqaale ee xirfadleyda qaaliga ah.
Hore: Gaariga Valet Cup
Xiga: Vizclear HD Vision Car Sun Visor
Qalabka Dayactirka Gawaarida
Qabashada Koobka Gawaarida
Gawaarida Gawaarida Koobka Gawaarida
Qalabka Ilkaha Gawaarida
Gawaarida Gawaarida Labaad
Cab Cabbiilaha Gaariga
Muraayadda Xtra View Car
Gaariga Valet Cup
Qalabka Ilkaha Gawaarida, Muraayadaha Qorraxda ee caadiga ah, Cab Cabbiilaha Gaariga, Saxanka caaga ah ee dib loo isticmaali karo, Suxuunta adag ee Caaga ah, Gaariga Kiilaha Baabulaha,